Maitiro ekuvandudza ruzivo rwevashandisi nemepu dzekupisa | ECommerce nhau
Maitiro ekuvandudza ruzivo rwevashandisi nemepu dzekupisa
Kuedza kuvandudza ruzivo rwemushandisi pane webhusaiti yedu, online chitoro kana peji rekumhara, chikamu chekushanduka uye kuenderera kunatsiridzwa kwekuenderera mberi. Heathermaps, inonziwo heatmaps, vanotipa nenzira inooneka uye yakapusa, zvinova ndizvo zvinomutsa kufarira kukuru, chii chatinofanira kuvandudza, uye zvinhu zvipi zvisingamboshandi kana zvisingamutse kufarira.
Kune mamwe "mabasa" akakosha kupfuura mamwe, zvichienderana nezvatiri kutsvaga. Uye kana zviri zvekuvandudza kufamba pamhepo kwevashandisi vedu, mamepu ekupisa anofanira kutora chinzvimbo chekutanga. Neichi chikonzero, tiri kuenda kuzoona zvavari, uye izvo zvekushandisa zvavanotipa. Ndedzipi nzira dzekutora mukana nadzo dzatinogona kuwana. Uye ndezvipi zviwanikwa zvatingawana kuti tikwanise kuzvibatanidza mumasaiti edu.
1 Chii chinonzi mepu yekupisa?
2 Mhando dzemapu ekupisa
2.1 Kubaya Heatmaps
2.2 Mouse kufamba kupisa
2.3 Mupumburu heatmaps
3 Heatmap Zvishandiso
4 Ini ndoda kuve nemepu dzekupisa, kuenda kupi?
Chii chinonzi mepu yekupisa?
Mepu yekupisa chishandiso chinotibvumidza isu kuziva hunhu hwemushandisi kana vashandisi kuburikidza mumiriri weiyo thermography pane yedu webhusaiti. Kubva kwaunobaya, kuenda iko mbeva yapfuura. Zvakare, ndezvipi zvinhu zvakakufadza iwe zvakanyanya uye wakagara kwenguva yakareba sei munzvimbo uye warega kuzviita.
Kuti uone nzvimbo dzinonyanya kufarira, chiyero chemavara chinoshandiswa kuona iyo "inopisa" (inonyanya kufadza) uye "inotonhora" (isinganakidze nzvimbo). Mhando yemavara inoenda kubva kunotonhora, kutanga nebhuruu uye girini, kune inotonhora, senge maorenji, matsvuku uye erima matsvuku. Kugona kuziva tarisiro yekutarisisa, inobvumira kuita sarudzo dzakakodzera kusimudzira zvinoitika zvevashandisi uye yavo interface kuenderana nenzvimbo.
Mhando dzemapu ekupisa
Iyo thermographic inomiririra iyo Heatmaps, sezvatakataura, inomiririrwa nemavara zvinoenderana nezinga ravo rekutarisa. Kuti uite izvi, iwo mavara akabatanidzwa akatenderedza "kupisa kana kutonhora" polarity. Nekudaro, hapana imwe chete mhando yemepu yekupisa. Izvi Vanogona kukamurwa mumapoka matatu makuru zvichienderana nezvatinoda kuongorora. Kubva pamabhatani, kuburikidza nekufamba kwechiratidziro, kuenda kumupumburu unoitwa nevashandisi pawebhusaiti yedu (inonakidza sarudzo yemipumburu mirefu kana isingaperi, sezvo ivo vava mufashoni).
Kusvika kure, iyo yakanyanya kushandiswa. Ivo vanobvumidza kuita-pfupi-sarudzo sarudzo nezve kugona kwezvinhu zvinoshanda pane yedu webhusaiti nekunyoresa mushandisi kudzvanya. Nenzira iyi, izvo zvakasarudzika zvinhu zvatinogona kugadzirisa nekukurumidza, ndiyo nzvimbo yekutarisisa yemepu dzemepu zvichibva pakabaya. Chii chimwe, Nekunyora zviito zvevashandisi, ivo vanoita iyo degree rechokwadi uye kukosha kwemamepu aya akakosha. Ivo vanopa diki nzvimbo yekuvhiringidza dhata, nekuti ivo vanoongorora kongiri zviito.
Mouse kufamba kupisa
Aya marudzi emamepu anoshanda mushe musiyano uye kuenzanisa nemamwe. Kunyanya nekuda kwezvidzidzo zviripo zvine chekuita nekwako mushandisi paanoisa iyo inotora. Kupfuura makumi masere muzana yenguva iyo maziso anoenda kunoenda iko iko kunotora. Uye nenzira imwecheteyo, inopfuura makumi masere muzana yenguva iyo maziso emushandisi haigume ichitungamira uko iko kokorodzano isina kuenda. Izvi zvinoreva kuti iyo data pane yekutarisisa kwevashandisi haisi 80% chaiyo, kusiyana nemhepo inopisa. Nekudaro, ivo vari padyo chaizvo neicho chaicho, uye vanoramba vachishanda zvakanyanya.
Inoshandiswa zvakanyanya mumapeji ane yakawanda yekutsikisa kana "infinity". Nenzira iyi, isu tinogona kuongorora yakadzika nhanho yemushandisi kana uchipuruzira uye ndedzipi nzvimbo dzinonyanya kunakidza. Uye zvakare, ivo vanobatsira kuona kana paine chero maitiro asina kujairika ari kuitika, senge vashandisi vanosiya iro peji kana vachiona banner. Uye zvinoenderana nekugadzirwa uye izvo zvinokurukurwa muchikamu, vanogona kududzira kuti peji rapera uye hapasisina zvemukati. Chinhu chatinogona kudzivirira kuburikidza nekubvisa kana kushandura mureza, semuenzaniso.
Kubatsira kukuru kwatingawana kubva kumamepu ekupisa kunobva dudziro yatinopa kwavari. Nzvimbo dzinomutsa kufarira kushoma uye isu tinoda kusimudzira, kana kudzvanya munzvimbo dzakaita semifananidzo isingasvike kwese. Tinogona kutora mhedziso kubva kune ese maitiro evashandisi. Panyaya yekudzvanya pamabhena kana mifananidzo, iyo isingatakure chero chinongedzo, zvinotevera kuti inomutsa kufarira. Naizvozvo, zvingave zvinonakidza kana iko kubaya kwakaitwa nevashandisi, kukavatungamira kune chimwe chinhu chingapiwe, ichiwedzera chinongedzo. Mukana wekushaikwa chero chinhu chinotaura kana chine chekuita nechinhu chisina basa, iko kubaya kunogona kuendeswa kune chimwe chinhu. Pfungwa yekupedzisira inotenderera pakudzivirira kushungurudzika kwekukanya chimwe chinhu pasina zvinokanganisa.
Panyaya yezvinhu zvinoshanda, zvakafanira kuongorora izvo zvisingashande. Pamwe chinhu hachimutse kufarira kana kuti hachizvisiyanisi pachacho sechinhu chinoshanda uye chichifuratirwa. Kana nekuti iri mune imwe nharaunda yezvinhu zvinoyevedza zvinokwezva kutariswa. Muzviitiko izvi, kana zvimwe zvakafanana, ichaongororwa kuti unzwisise zviri kutadza, uye kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu.
Semuenzaniso, simbisa chinhu: Zvichida chimwe chinhu chiri kutarisisa. Semuenzaniso, kushevedzwa kune chiito chemavara asingazivikanwe pakutanga kwechinyorwa nemufananidzo unoshamisa. Zvingave zvinonakidza kushandura typology yekufona chiito, kuchichinja chenzvimbo kana zvese zviri zviviri.
Ini ndoda kuve nemepu dzekupisa, kuenda kupi?
Kune mapuratifomu akasiyana anotibvumidza isu kuisa mepu yekupisa pawebhusaiti yedu. Chinhu chakanakisa pamusoro pavo kushanda kwavo, uye chakashata ndechekuti ivo vanonyanya kubhadharwa. Ivo vanogona zvakare kubatsira kudzora kudzikiswa kwewebhu (pasina kuve kuwedzeredza), saka kuve neimwe script yakaiswa, mukuwedzera, zvichave nyore kushandura makuki kunyevera vashandisi (chimwe chinhu chiri nyore kuita).
Yandex Metrica: Mune ino kesi ndeye mahara uye inogona kuyedzwa mune yayo demo vhezheni. Ivo vanotipa isu kupisa mepu dzekudzvanya uye scroll.
Mepu inopisa: Chimwe chishandiso chiri mahara, ehe, chimiro chayo chakati omei.
Kune mamwe maturusi andisina kusanganisira paakabhadharwa, uye kuti sevamwe, tinogona kuona kuongororwa kwavo. Kupinza mepu yemavara, kunyanya kana tiine webhusaiti kwatinopa masevhisi, makosi, kunyoreswa, zvigadzirwa kana chero chinhu, ichave iri nzira yakanaka yekugadzirisa mashandiro ayo. Saka pakupedzisira, hatizongogadzirise ruzivo rwevashandisi chete, asi mabhenefiti ayo isu pachedu tinotarisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Maitiro ekuvandudza ruzivo rwevashandisi nemepu dzekupisa
Yakakosha dhata yekuongorora mune yeA / B bvunzo